हास्नुका फाइदै फाइदा , हेर्नुहोस कसरि हास्दा के फाइदा – rastriyakhabar.com
काठमाडौँ ।तपाई हाँस्नुहुन्छ, हामी हाँस्छौ । हाँस्दा के हुन्छ ? त्यो शब्दमा व्यक्त गर्ने कुरा होइन, अनुभूत गर्ने कुरा हो । मस्त हाँस्दा वा मुसुक्क मुस्कुराउँदा कस्तो महसुष हुन्छ ? हामीले अनुभव गरेकै छौं ।
कति व्यक्तिको स्वभाव नै हुन्छ, हाँस्ने । उनीहरु हरबखत हाँसिरहेका हुन्छन्, मुस्कुराइरहेका हुन्छन् । ति व्यक्तिहरुको संगत गरौं । उनीहरु कसरी हाँसिरहेका छन् रु बोलिपिच्छे उनीहरु कसरी मुस्कुराउँछन् रु पच्छ्याउने कोसिस गरौ ।
मस्ती गरौं । साथीभाईसँग पिकनिक जाने, घुमफिर गर्ने, परिवारसँग सिनेमाघर जाने, रेष्टुरेन्ट जाने गरौं । यद्यपी सधै यो संभव हुँदैन । त्यसैले घरमै नाच्ने, रमाइलो गर्ने, मिठोमसिनो खानेकुरा पकाउने, टिभी हेर्ने, म्युजिक सुन्ने गरौं ।